Ukuyila igumbi labantwana kwiinkwenkwe zengcamango zangaphakathi zentombazana
KwiNdlu Design Interior
Ukuyila igumbi labantwana kwiinkwenkwe zamakhwenkwe eziza kunceda ukudala ngaphakathi
Ukuyila ikamelo labantwana lokuba le nkwenkwe igqibe kwaye ilungile, kufuneka uqikelele zonke iinkcukacha: ukhethe iphepha lodonga elifanelekileyo, amakhethini, i-candle kunye nezinto zokuhlobisa. Xa ukhetha uyilo, kufuneka ugxininise kwiminyaka, iimfuno kunye nezinye izinto.
Ukuhluka kwamagumbi abantwana kubafana
Kukho uluhlu olukhulu lweendlela zokuyila kunye neendlela ozimele uzifunde xa ukhetha ukuyilo olufanelekileyo. Iimbono zegumbi labantwana le nkwenkwe kufuneka zilandelane ngokuxhomekeke kwiminyaka yomntwana. Iingcali zengqondo zincoma ukuba zingayigxili imbono yomntwana xa sele sele eyazi kakuhle. Siyabulela oku kuya kubakho ukudala indawo efanelekileyo.
Igumbi lomfana osandula
Ukufunda ukuyila komntwana, abazali kufuneka bajolise ngakumbi kwizinto abazikhethayo, kuba umntwana akanandaba nendlela yokuhlala kuyo iya kubonakala ngayo. Igumbi elincinci labantwana elincinci lifanele lihlotshwe ngemibala ekhanyayo ukuze kungabi ukwandisa isikhala, kodwa kudala nomoya ococekileyo oya kuthatha isenzo. Okugqithiseleyo kuluhlaza okuluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, oluhlaza kunye nolwaphuzi.
Igumbi labantwana labafana benkwenkwe
Kukho imibala emininzi enokuthi ithathelwe ingqalelo xa ihlela ukuyila kwegumbi.
Sebenzisa indawo yokumisela . Abaqulunqi bancoma ukubukeka okanye ngokwenyama bahlule igumbi lokudlala, indawo yokulala kunye noqeqesho. Ukwenza oku, ungasebenzisa ukugqitywa kwemibala eyahlukeneyo, ifenitshala okanye uthenge isahlulo esikhethekileyo, esinokuba yindawo yokudweba.
Isitayela sokuhlobisa igumbi labantwana kwinkwenkwe kufuneka likhethwe ngokwezinto ezithandwa ngumntwana. Ukuba uklanywa kukhethwa ukukhula, ke ukhethe ukukhetha imibala engathathi hlangothi. Ngomsebenzi womsebenzi, sebenzisa i-shades ezithuthukisa ingqalelo kunye nokusebenza kwengqondo.
Xa ukhetha ifenitshala ekamelweni leklasana kubalulekile ukuqwalasela ukukhula komntwana. Kukulungele ukhethe ukuyila i-transformer engaguquleka ekuphakameni.
Ukukhanyisa kufanele kube yinto efanayo, kungabonakali kwaye kungabi mhlophe kakhulu. Isisombululo esona sikhulu sisibane esineziqwenga ezongezelelweyo kunye nomjikelezo wesilingi. Kwi-desktop kufuneka ibe sisibane sesibane nge-bulb LED.
Igumbi lentombazana yenkwenkwana
Xa umntwana eba ngumntu omdala, kuyimfuneko ukuqwalasela iimfuno zakhe kwaye ukhethe iindlela ezifanelekileyo zokuyila. Iindlela ezikhethwa kakhulu ziquka:
IVanguard. Kule ndlela, ukuphulwa kwe symmetry kugcinwa ngokuxhomekeka kwimilo ethile yejometri. Igumbi lezingane kumfana osemtsha lithetha ukusetyenziswa komgangatho ongaqhelekanga kunye nokusebenza. Amandla, ukuziphendulela kunye nokuzibonakalisa kuyimpawu kwi-avant-garde.
Indlela yaseMerika. Kule khetho ibonakaliswe ngumbutho osebenzayo wendawo, ifenitshala jikelele, ukusetyenziswa kwezinto ezixabisekileyo okanye ukuxelisa kwabo, baze baveze ukukhanya.
Minimalism. Ukwakhiwa kwegumbi lezingane kwinkwenkwezi kule ndlela kuthetha ukukhutshwa kwezinto ezingadingekile kunye nokukhululwa kwesithuba.
I-high-tech. Le ndlela ibonakaliswa yimpahla epholileyo, iimveliso zetsimbi kunye neendwangu ezibandayo.
Loft. Inketho efanelekileyo yokwenza i-nursery, kuba akukho mfuneko yokuhambelana nesicwangciso esinye. Olu hlobo luza kukwazi ukubonakalisa ukungaboni kakuhle kwe-adolescence.
Kitsch. Efanelekileyo kumntwana odala, kuba kubonisa ukuphulwa kwayo yonke imithetho.
Uyilo lobugcisa. Le ndlela ifanelekile kubafana abathanda ubuchwephesha, umzekelo, iimoto, iinqwelo, iitank, izitimela njalonjalo. Sebenzisa imihlobiso yeefowuni, ezinkulu kunye nezincinci.
Isikhala. Isitayela esithandwayo kakhulu somhlobiso, apho kubalulekile ukunyamekela kuzo zonke iinkcukacha: isibhakabhaka esibhakabhaka, udonga lwamadonga kunye nokushicilela okufanelekileyo kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
Igumbi loyilo loomfana abafana
Ukuba ngaba abafana ababini bahlala kwigumbi kanye, ngoko kubhaliswa kubalulekile ukuqwalasela ukuba ukuyila kufuneka kubonise ubuntu bomntwana ngamnye, kodwa ngexesha elifanayo livisisane kwaye lidibeneyo. Igumbi lamantombazana amabini amakhwenkwe kufuneka aqwalasele imigaqo yokucandwa kunye nokucwangciswa.
Ukuba indawo iyavuma, ngoko kuyacetyiswa ukuba yabelwe imimandla emine: ukuphumla, ukudlala, ukufunda nokugcina izinto.
Amakhwenkwe amabini, unokukhetha umbhede wombhobho okanye ifenitshala yefomula. Kukho iindlela ezahlukeneyo, umzekelo, xa iibhedi ziphezulu, kunye neetafile zezifundo okanye iikhabhinethi ezivela ngasezantsi.
Ngomntwana ngamnye, kufuneka ubeke indawo yakho yomsebenzi. Kukho i-sliding, ipolding or folding tables.
Kulo lwakhiwo lwegumbi labantwana le nkwenkwe kubalulekile indawo yokudlala, kwaye apha kufuneka uqwalasele iminyaka yobudala bomntwana. Kubantwana abancinci kunokwenzeka ukubeka amathoyizi kule ndawo, kunye nabantu abadala - kwikona yezemidlalo. Kubalulekile ukuba iimfuno zababini abafana ziqwalaselwe.
Ingubo yokugqoka yokugcina impahla kufuneka ihlulwe ibe ngamalungu amabini alinganayo.
Ngaphakathi kwendawo yenkwenkwe
Ukucinga malunga nokuyila kwee-nursery, cinga ubungakanani beendawo ezikhoyo, inani labantwana kunye nobudala babo. Ukubala okufanelekileyo kuphela kuya kunika iziphumo ezilungileyo. Yenza indawo yenkwenkwe kule ngcebiso elandelayo:
Iingcaphephe zincoma ukuba njengoko uyilo oluyintloko lukhetha i-shades elula, umzekelo, isanti, ukhilimu, igolide kunye njalo. Kuya kuba yimvelaphi ebalaseleyo yokuvakalisa okugqamile, umzekelo, ifenitshala, izixhobo kunye nokunye okunjalo.
Umgangatho womntwana, khetha i-laminate okanye i- linoleum , kwaye phezulu kwendawo yokudlala, faka ikhapiti elithambileyo nefuthe elinokucocwa lula xa kuyimfuneko.
Xa uyila uyilo lenkwenkwe yabantwana, khumbula umyalelo wokhuseleko ohambelana nomgangatho wezinto kunye nefenitshala.
Imibala yegumbi lomntwana kwinkwenkwana
Into ebalulekileyo ekuhlobiseni igumbi kukukhetha icebo lombala. Ukucinga ngombala weendonga egumbini labantwana le nkwenkwe, qwalasela ezi zilandelayo ngcebiso:
Ukuba iifestile ziya ngasenyakatho, ngoko kuya kubakho ukukhanya okuncane kwindlu, ngoko ke kufuneka ukhethe umthunzi okhanyayo, umzekelo, i-beige, eluhlaza okwesibhakabhaka, isanti, eluhlaza okanye emhlophe.
Emagumbini apho kukho ukukhanya okwaneleyo, kuya kufaneleka kwiphepha lodonga kwimbala ebanda, efudumele, ebandayo kunye emnyama. Ngokomzekelo, unokuzisa imvi, eluhlaza kunye nabanye.
Amagumbi amancinci afanelekileyo imibala eya kubonakala kwandisa isikhala. Ukuba ubamba iphepha lodonga, ukhethe ukhetho olukhethiweyo ngomzekelo omncinci.
Ukuba umntwana engenzi, ke ukwandisa umsebenzi kunye nokuvuselela, khetha obomvu, ophuzi, oonandi kunye neminye imibala ekhanyayo. Akufanele isetyenziswe njengesiseko, kodwa ngohlobo lwama-accents-oku kunjalo.
Kunconywa abantwana abangenasifo, abangathathi hlangothi kunye nabaxhasiweyo, okuya kuba nefuthe lokuthoba.
Izikrini egumbini kubafana
Kuba ukulungiswa kweendonga kungasetyenziselwa iphepha lodonga, kunye nezinye iindlela zokukhetha kunye nephethini, imivimbo kunye neepateni zejometri. Konke kuxhomekeke kwisitalelo esikhethiweyo kunye neminyaka yomntwana. Iimfesithi ezithandwa kakhulu kwiklasi yenkwenkwana:
I-Flizeline linens isetyenziselwa ukudweba, ngoko unako ukuguqula ngexesha loyilo. Abafali, bajonga umzobo kwaye bahlamba.
Ukungahlawuliseki kwintlawulo yamaphepha amaphephadonga ahlala emfutshane, kodwa afanelekileyo abo bafuna ukutshintsha i-trim kaninzi ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
Uyilo lwegumbi labantwana le nkwenkwe lingazenza ngephepha lodonga, elibukeka lugqwesileyo nelingavamile. Ngosizo lwabo, unako ukurhoxisa ukungalingani kweendonga.
Iphepha lodonga lendleko likhethiweyo kwigumbi lomfana omdala, ukuze bangabi nokoyika ukuba baya kuhlahloka ngokukhawuleza. Kufanelekile ukuphawula ukufumaneka kwimibala ephakamileyo yembala.
Ifoto yamaphephadonga ekamelweni lomfana
Ukusetyenziswa kwephepha lodonga-ukufikelela kwinqanaba elithile, elifunyenwe ngoncedo lweendlela zobuprinta bezithombe. Ngoncedo lwabo, unako ukuzalisekisa ingaphakathi kwisitayela esikhethiweyo kwaye uvakalise ubuntu bomnini. Iingcali zengqondo zithi umfanekiso ochanekileyo unceda umntwana wakho akhule ngokukhawuleza. Ukwakhiwa kwegumbi elincinane kwinkwenkwe kunokuba yinto efana nale ndlela: iindlovu, indawo, iintyatyambo, ulwandle kunye nabanye abaninzi. Kwiimeko ezininzi, imifanekiso yamaphephadonga asetyenziselwa ukugqamisa ummandla.
Ifenitshala kwigumbi le nkwenkwe
Ukuhambisa ngokufanelekileyo indawo yokukhulula kunye nokwenza igumbi lokuqala, kucetyiswa ukuba ukhethe amacandelo ahlukeneyo, ukunyumba, ukuhambisa kunye nezakhiwo ezininzi. Xa ukhetha ifenitshala kwigumbi le-adolescence, inkwenkwana kunye nabantwana beminyaka yobudala kufuneka baqaphele ukuba kufuneka ibe namandla, uzinze kwaye ukhuselekile. Kungcono ukushiya izinto zeglasi kunye nezesekeli zokukhonza. Ungazihlanganisi indawo kwaye usebenzise ifenitshala eyongezelelweyo, ngoko ke izifundo eziphambili ziquka: umbhede, ikhabethe, itafile kunye nesihlalo.
Amakhontanga ekamelweni lenkwenkwe
Akukho mihlali ekukhethweni kwamakhethini akufanele ibe kunye kwaye kufuneka ikhethwe kwisitayela esicacileyo selaconic. Kukho iingcebiso ezininzi zokukhetha amakhethini:
Kungekudala, amakhethini athandwa ekamelweni lentombazana enesithombeni. Ungasebenzisa nayiphi na imifanekiso kwisithambiso, umzekelo, indawo ye-landscape okanye umdwebo we-cartoon.
Ngokubhekiselele kwinqumle, kucetyiswa ukuba ingqalelo ingqalelo into engagqithisi ukukhanya, umzekelo, umnyama. Ukongezelela, iifaleni ezifanelekileyo zenziwe ngeelinen kunye nekotoni.
Kubantwana abancinane, amakhethini aqhakazileyo kunye nomzekelo ocacileyo uya kusebenza, kwaye kubafundi besikolo bakhetha amathoni amaninzi, umzekelo, i-blue, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza nokunye.
Kuhlobo oluthile lwamakhethini, kucetyiswa ukuba uthenge ingubo kunye ne-pillowcases yeemithwalo zokuhlobisa.
Isilwanyana kwigumbi lezingane le nkwenkwe
Ukugqibela ngokugqibeleleyo kwendawo yokulala kuza kunceda ukudala idizayini efanelekileyo kunye nepheleleyo. Iinqununu zamanqanaba amabini okanye ezimbini ziyakwenziwa. Isisombululo esikhulu sisilula esilulayo kwigumbi lekwenkwenkwe, elingenakusebenza kuphela, kodwa elihle. Okukhethiweyo ngokukhethekileyo imidwebo eneemidwebo, umzekelo, nabalingiswa bekhathuni, iintyatyambo, isibhakabhaka, iinkwenkwezi. Ukuba unqwenela, ilitwe elide lingatshintshwa kuxhomekeke kwiminqweno kunye nobudala bomntwana.
Umkhanda kwigumbi le nkwenkwe
Kukho uluhlu oluthile lweengcebiso ezifanele ziqwalaselwe xa zikhetha izixhobo zokukhanyisa:
Khetha izibane ngezibane ze-LED, ezoqoqosho kwaye zenze ukukhanya okumnandi.
Qaphela ukuba ubukhulu bebhanya kufuneka bubambane nommandla wegumbi. Amagumbi amakhulu, isibane esikhulu kunye nesibindi sifanelekile. Ukuba izifowuni ziphantsi, ke ukhethe i-chandelier yelitsha
Gxininisa kwisitayela somhlobiso, umzekelo, ukuba igumbi lisesigxeni se- nautical yenkwenkwe, ke ukhethe umkhonto ngesimo somkhumbi okanye isondo. Ukuba idizayini i-cosmos, ngoko isibane sinokubonakala ngathi maplanethi.
Iingcali zincoma ukuba zonge i-chandelier yelityambo kunye neengqungquthela okanye i-sconces.
Ungayigcina njani ikhethini ngezandla zakho?
Ukunyanzeliswa ngaphakathi kwendawo yokuhlala
Laminate kunye nenqindi
Uyilo lokulala kwigumbi lokulala
Isifuba seplastiki sabantwana beebhola
Ifoto yeso sixeko sasebusuku
Umtshini wokhuni onezandla
Ifenitshala yomnxeba weRattan
Iimfashini zokuhlwaya zambini zincinci kwaye zizele
Iingubo zokuhlwa ezigqibileyo
Indlela yokucoca umhlophe wokuhlamba?
Icawa yaseSt. George
Buckwheat kunye nenyama ebhodweni
Umgangatho umele iintyatyambo
Inyama yesibindi i-hepatosis: ukutya
I-Ischemic stroke - iimpawu
I-Chandelier ene-remote control
Abazali abafayo baphupha ntoni?
UJim Carrey wanikela ingxelo malunga nokuzilibazisa kwakhe
Iinkwenkwezi ezili-17 ezisibetha ngokusebenza kwe-asanas yoga ezinzima
Yintoni eluncedo kwi-ayran?
Yiyiphi iwayini ilungele iwayini elidityanisiweyo?
Kalatea - iingcebiso zamaqabunga owomileyo